चीन खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स निर्माताहरु र कारखाना - QiangAn द्वारा तातो गर्न सकिन्छ
घर > उत्पादनहरु > वातावरणीय गर्मी प्रतिरोधी टेबलवेयर र Biopbs पूर्ण रूपमा गिरावट योग्य > खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स द्वारा तातो गर्न सकिन्छ
Kunshan QiangAn इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड खाद्य ग्रेड को एक सीधा बिक्री कारखाना हो र चीन मा माइक्रोवेव बक्स उत्पादनहरु द्वारा गरम गर्न सकिन्छ। यसको उत्पादन प्रक्रिया प्रदूषण रहित छ, किनकि हामी पर्यावरण संरक्षण अनुसन्धान, नवाचार र निर्माण को लागी प्रतिबद्ध छौं, र हाम्रो ग्राहकहरु लाई सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछौं। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरु खाना ग्रेड चाकू, काँटा, चम्मच, कफी कप lids, पराल, लंच बक्स, प्लेट, आदि सबै उत्पादनहरु MA, CNAS, ILAC-MRA चीन मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मान्यता परीक्षण र प्रमाणीकरण को खाद्य ग्रेड प्रमाणपत्र पारित गरेका छन्। ।
खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स द्वारा तातो गर्न सकिन्छ पर्यावरण को अनुकूल BIO PBS जैव आधारित पुरा तरिकाले degradable सामाग्री बनेको छ। जैव पीबीएस सामाग्री -20 को रूप मा कम र 90 डिग्री सम्म तापमान को सामना गर्न सक्छ, र प्राकृतिक पर्यावरण कम्पोस्टिंग शर्तहरु को तहत 180 दिन पछि पूर्ण रूप बाट अपमानित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो कार्बन डाइअक्साइड र पानी मा विघटित हुन्छ, र माटो मा गायब हुन्छ। यसले धेरै प्रदूषण घटाउँछ र वातावरण को रक्षा गर्दछ।
खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स उत्पादनहरु द्वारा तातो गर्न सकिन्छ गैर विषाक्त, गन्ध रहित, उच्च तापमान प्रतिरोधी, वातावरण मैत्री, सफा, सेनेटरी, सुरक्षित र स्वस्थ, र सीधै खाना सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो साधारण प्लास्टिक र कागज खाजा बक्सहरु को तुलना मा अधिक पर्यावरण को अनुकूल छ। यो व्यवसाय र व्यक्तिगत खानपान को लागी एक आदर्श विकल्प हो, र धेरै पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ। लंच बक्स को आकार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
सर्कल डिस्पोजेबल वितरण Bento- बक्स आवरण संग
बाहिर निकाल्ने बारे मा सोच्नुहोस् तर dishes ™ t बर्तन धोउन चाहानुहुन्छ, बीचमा पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता। हामीले के गर्नुपर्छ? हामी सही समाधान पाएका छौं! सर्कल डिस्पोजेबल डिलिवरी Bento- बक्स हामी बाट कवर संग किन्न स्वागत छ। ग्राहकहरु बाट हरेक अनुरोध २४ घण्टा भित्र जवाफ दिइन्छ।
सर्कल डिस्पोजेबल टेक-आउट बक्स आवरण संग
बाहिर निकाल्ने बारे मा सोच्नुहोस् तर dishes ™ t बर्तन धोउन चाहानुहुन्छ, बीचमा पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता। हामीले के गर्नुपर्छ? हामी सही समाधान पाएका छौ! तपाइँ हाम्रो कारखाना बाट कवर संग सर्कल डिस्पोजेबल टेक-आउट बक्स किन्न आश्वासन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो बिक्री पछि सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्नेछौं।
सर्कल डिस्पोजेबल वितरण कभर संग खाना कंटेनर
बाहिर निकाल्ने बारे सोच्नुहोस् तर the ™ t भाँडा धोउन चाहनुहुन्न, यसै बीच पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता गर्नुहोस्। हामीले के गर्नुपर्छ? हामी सही समाधान मिल्यो! पेशेवर निर्माण को रूप मा, हामी तपाइँ कवर संग सर्कल डिस्पोजेबल वितरण खाना कंटेनर प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ। र हामी तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो बिक्री पछि सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्नेछौं।
सर्कल डिस्पोजेबल वितरण भोजन बक्स कभर संग
बाहिर निकाल्ने बारे सोच्नुहोस् तर dishes ™ t भाँडा धोउन चाहनुहुन्न, यसै बीच पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता गर्नुहोस्। हामीले के गर्नुपर्छ? हामी एकदम सही समाधान पाएका छौं! कभर निर्माणको साथ एक पेशेवर सर्कल डिस्पोजेबल डिलिवरी भोजन बक्स को रूप मा, तपाइँ हाम्रो कारखाना बाट कवर संग सर्कल डिस्पोजेबल डिलिवरी भोजन बक्स किन्न आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ र हामी तपाइँलाई सबैभन्दा राम्रो बिक्री पछि सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्नेछौं।
स्क्वायर डिस्पोजेबल टेक-आउट बहु-ग्रिड खाजा बक्स आवरण संग
बाहिर निकाल्ने बारे सोच्नुहोस् तर the ™ t भाँडा धोउन चाहनुहुन्न, यसै बीच पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता गर्नुहोस्। हामीले के गर्नुपर्छ? हामी सही समाधान पाएका छौं! हामी बाट कवर संग स्क्वायर डिस्पोजेबल टेक-आउट बहु-ग्रिड लंच बक्स किन्न स्वागत छ। ग्राहकहरु बाट हरेक अनुरोध २४ घण्टा भित्र जवाफ दिइन्छ।
वर्गहरु डिस्पोजेबल वितरण बहु ग्रिड लंच बक्स कभर संग
बाहिर निकाल्ने बारे मा सोच्नुहोस् तर dishes ™ t बर्तन धोउन चाहानुहुन्छ, बीचमा पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता। हामीले के गर्नुपर्छ? हामी एकदम सही समाधान पाएका छौं! स्वागत छ नयाँ र पुराना ग्राहकहरु सँगै एक राम्रो भविष्य बनाउन को लागी हामी संग सहयोग जारी राख्न को लागी!
QiangAn चीन मा एक प्रसिद्ध खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स द्वारा तातो गर्न सकिन्छ निर्माताहरु हो। उच्च गुणस्तर खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स द्वारा तातो गर्न सकिन्छ चीन मा बनेको छ हाम्रो कारखाना बाट सस्तो मूल्य संग अनुकूलित गर्न सकिन्छ। जब सम्म तपाइँ उत्पादनहरु जान्न चाहानुहुन्छ, हामी योजना संग एक संतोषजनक मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो कारखाना बाट, तपाइँ न केवल उन्नत उत्पादनहरु, तर नयाँ उत्पादनहरु पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ हाम्रा उत्पादनहरु मा रुचि राख्नुहुन्छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तुरुन्तै, हामी तपाइँ एक उद्धरण प्रदान गर्नेछौं।